FAN’S CLUB M3TV : Nanao asa sosialy ho an’ny tanora ireo mpikambana
Nisafidy hanampy ny mpiara-belona niangaran’ny vintana ireo mpikambana ao amin’ny M3TV-FM ny sabotsy teo. 20 novembre 2018
Vary, vola, savony ary lamba fitafy isan-karazany no natolotr’izy ireo tamin’izany, ny sabotsy maraina teo. Ireo mahantra sendra azy ireo teo amin’ny zaridaina Santatra ka hatreny amin’ny bazary Mahabibo no notoloran’ izy ireo izany. Natao anaty harona plastika ireo fanampiana ary natolotra ireo olona marefo. “Tsy manana ny ampy izahay fa sambatra ny mifanampy”, hoy ny filohan’ny fikambanana Rooni Hassan.
“Tanora izahay ary te hametraka modely fifanampiana eo amin’ny fiarahamonina”,hoy hatrany izy. Miisa 150 mahery ireo mpikambana ao amin’ny fan’s club ny M3tv-Fm ankehitriny. Fikambanana nitsangana ny 19 febroary 2004 izy io, ary betsaka ireo tanora nitombo tao. 10 ka hatramin’ny 35 taona ireo mpikambana ka misy ny mpianatra, ao koa ny mpiasa ary misy ny mbola mitady asa. Mahay mandray anjara amin’ny fiarahamonina sy tia mifanampy ireto ankizy ireto ary manentana ny namany hiditra anatin’ ny fikambanana.
Mikaroka ny mahasoa hatrany izahay ato amin’ny fikambanana, hoy izy ireo. Tsy hijanona hatreo ny hetsika ataon’ireto tanora fa hitohy hatrany. Nisaotra sy nankasitraka ary nitsodrano ireo tanoran’ny fan’s club ireo nahazo fanampiana.